Maitiro ekubvisa iyo PIN pane iPhone, dzidza kuchinja kodhi | IPhone nhau
Dzimwe nguva tinoda rubatsiro kuti tiite mamwe mabasa angaite senge akareruka. Uye zvinogona kuitika kuti basa rekushandura PIN kodhi yeSIM ye iPhone yedu inogona kunge yakavanzika zvishoma kupfuura zvataizoda, kupfuura chero chinhu nekuti pakati pechengetedzo yakawanda iyo Apple inopa seyakajairwa pane yayo iPhone, chinja iyo SIM PIN ingaite kunge isingakoshe. Nekudaro, kuti iwe ugone kuchichinja icho chako sezvaunoda, MuActualidad iPhone isu takuunzira iwe dzidziso kuti iwe ugone kushandura iyo PIN kana kutomboimisa kana uchida.
Kuchinja PIN yeSIM kadhi kunogona kuita kunge kusingakoshe nhasi, nekuda kwekuchengetedza iyo Tsvaga yangu iPhone inotipa kubva kwatinogona kutsvaga nekuvharira iPhone yedu pakurasikirwa nekukanganisa, uye tichifunga kuti neiyi link neApple ID yedu yaizoshandura foni inova isingashandisike kana uchiedza kuidzosera kumberi. Nekudaro, chero matanho ekuchengetedza atinogona kusanganisira kuti tiite basa rembavha riome sezvinobvira rinokurudzirwa.Ndokusaka nhasi tichitsanangura maitiro ekugadzirisa iyo PIN kodhi yako SIM kadhi.
Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kuisa iyo «Zvirongwa» kunyorera, kana tangoenda tichafamba nemenyu kune iyo «Runhare» chikamu. Tichaenda muPhone submenu kusvika panosvika kupera kwemazita kusvika SIM sarudzo, uko kwatinozoona "SIM PIN" uye "SIM Zvishandiso". Iye zvino isu tinongopinza iyo SIM PIN uye isu tinokwanisa kuwana izvo zviviri zvingasarudzwa zvatinoda, kumisa kana kuremadza iyo PIN, kana kune rimwe divi chinja SIM PIN kana tichida.
Mune aya matatu matanho akareruka isu takatokwanisa kuwana iyo SIM sarudzo. Ini pachangu ndakaremara, kupfuura chero chinhu nekuti idzi nhare hadziwanzo kudzimwa nhasi, uye kuva zvakadaro nguva nenguva ndinowanzo kanganwa SIM kadhi PIN. Nekudaro, sezvatakambotaura, chero chengetedzo chiyero chidiki.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekubvisa PIN pane iPhone
Uri kufinhwa here?
Icho chizere here?
Kana kuti ndezvekuti ivo vanobhadhara pane rimwe bhuku?
Pindura kuna ktre
hahaha ndakafunga zvakafanana xD
Zvakanaka kuona kuti munyika muchine vanhu vachiri kuziva zvese, saKtre naSebastián, uye vanofunga kuti vamwe vese vanofanirwa kuziva zvese zvakare ... regai tione kana vachigona kugadzirira yavo yenyanzvi danho foramu.
Manheru akanaka Kushamiswa.
Iko kune kiyi, peji rino ndere munhu wese, nyanzvi uye vashoma nyanzvi. Iwe hauzive kuti newbie inokoshesa zvakadii mamwe matipi ayo angaite kunge akareruka uye dzimwe nguva kuve akaomarara
Toni Michel Caubet akadaro
uye kana ndikasashandisa sim? ndinobvisa sei kodhi yauinayo (uye kuziva nezvayo)?
Pindura Toni Michel Caubet